Vitan'ny Google ny fividianana Fitbit | Androidsis
Amin'ny 1 Novambra 2019, voamarina izany tsaho misokatra ao anatin'ny sehatry ny haitao, tsaho izay nanolotra izany Afaka nividy Fibit i Google, ny mpanamboatra veteranina be indrindra eto an-tsena raha ny fanatanjahan-tena no mamaritra ny fehin-tanana. Toy ny mahazatra amin'ity karazana fividianana ity, ny manampahefana misahana ny lalàna dia tsy maintsy nanome mialoha.
Manam-pahefana mifehy izay, mandraka androany, manontany tena foana aho hoe inona no eritreretin'izy ireo tamin'ny 2014 namela ny fividianana WhatsApp tamin'ny alàlan'ny Facebook. Nanokatra fanadihadiana ny Vaomiera eropeana hanamarinana izay hitranga amin'ny angon-drakitra fitbit an'ny mpanjifa.
Ary farany, ny Kaomisiona eoropeanina dia nanome ny mialoha ny fividianana satria i Fitbit dia manome antoka fa ny angon-drakitra mpampiasa Fitbit tsy ho ampiasain'i Google amin'ny fotoana rehetra ho an'ny dokam-barotra, satria hitazona tsy miankina amin'ireo tahiry Google ny angona. Ho fanampin'izay, ny fahalianan'i Google dia amin'ny fitaovana fa tsy amin'ny angon-drakitra mpanjifany (fahamarinana izay azontsika antsaina antsasa-manila).
Avy amin'ny Google dia manamafy izy ireo fa hanohy hanana safidy ny mpampiasa mifandray amin'ny serivisy antoko fahatelo hanara-maso sy hamakafaka ny hetsika ara-batana ataonao, nefa tsy terena hampiasa ny vahaolana atolotry ny Google amin'ny alàlan'ny Google Fit.
Io no teboka manan-danja indrindra izay nanamarina ny fanapahan-kevitry ny Vaomiera Eraopeana hanokatra fanadihadiana, nanomboka te hisoroka ny ampihimamba (zavatra tsy nataon'izy ireo tamin'ny WhatsApp ary manenina izy ireo ankehitriny).
Fitbit no nitarika ny fivoaran'ny fehin-tànana quantista
Fitbit dia nandefa ny fehin-tànana nanisa voalohany tamin'ny 2009 ary nanomboka teo dia napetrany teny an-tsena singa maherin'ny 120 tapitrisa. Na izany aza, tato anatin'ny taona vitsivitsy, noho ny fiakaran'ny mpanamboatra vaovao, dia sarotra kokoa ny mahazo olona bebe kokoa, noho izany dia miloka amin'ny fanolorana tolotra fanampiny izay tsy ananan'ny mpanamboatra hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Vitan'i Google ny fividianana Fitbit
Qualcomm dia mandefa ny Snapdragon 870 ho an'ny finday avo lenta mora vidy kokoa
Milalaova ny fizarana roa voalohany amin'ny sary maimaimpoana, zava-miafina mahagaga an'ny Tim Burton